Antanimena-Cinéma Ritz : nesorina ireo peta-drindrina tsy manara-dalàna | NewsMada
Antanimena-Cinéma Ritz : nesorina ireo peta-drindrina tsy manara-dalàna
Nanala ireo peta-drindrina tsy manara-dalàna teny Antanimena sy teny amin’ny manodidina ny Cinéma Ritz ny ekipa teknika avy ao amin’ny boriborintany voalohany, ny faran’ny herinandro teo. 26 ireo mpiasa niara-nirotsaka nanatanteraka izany.
«Mafimafy ny asa », hoy ireo ekipa satria maro loatra ireo afisin’ireo karazam-piangonana zandriny sy karazana fianarana ary ny fampisehoana ataon’ireo mpanakanto mipetaka eny amin’ireo rindrina izay tsy tokony hametahana izany akory.
Raha ny eto an-drenivohitra, efa misy ireo toerana natokana hametahana peta-drindrina. Mialoha izany anefa, tsy maintsy manao fangatahana eny aivon’ny kaominina ireo izay mikasa hametaka izany.
Betsaka ireo mametapetaka afisy eny rehetra eny, indrindra amin’ny toerana be mpandalo na talaky maso kanefa tsy natokana ho an’ny peta-drindrina akory. Ny sasany koa tsy mandalo any amin’ny kaominina akory manaraka ny an-tanan-tohatra tokony hatao vao mametaka izany ka tafiditra ao anatin’ny tsy manara-dalàna ihany.
Maika ireo mpikarakara lanonana sy fiangonana zandriny mametaka afisy rehefa misy hetsika fitadiavam-bola hataon’izy ireo. Tsy mba manala izany afisy izany akory anefa rehefa vita ny hetsika fa avela hanaratsy ny endriky ny tanàna eo izany peta-drindrina izany.
Betsaka ny fiangonana zandriny sy ny mpikarakara hetsika no mifamaly ihany koa amin’ny fametahana afisy satria lasa mifanindry sy mifanakona ny peta-drindrin’izy ireo noho ny tsy fifanajana sy ny fahamaizana samy hisarika olona.
Hatramin’izao, tsy mbola heno ny filatsahan’ny sazy amin’ireo tsy manara-dalàna sy mpanao gaboraraka amin’ny peta-drindrina na fanta-poko fanta-pirenena aza izany. Matetika, misoratra amin’ireny peta-drindrina ireny ihany koa ny findain’ireo mpikarakara hetsika izay tokony ho mora arahina ny fanasaziana azy rehefa mihoa-pefy.